Siyavuyisela ngoMhla woNtsapho 2017 kwiprose, imifanekiso, indoda evela kumfazi wayo, ii-sms, kwivesi, ndithandwa, ndivuyisana ngosuku lweentsapho
Nayiphi na iholide inika umoya okhethekileyo, umvakalelo wokonwaba kunye nokulindela into enhle. Kwaye ukuba loo mcimbi obalulekileyo awukuphela kweveki engavamile kuphela, kodwa kunye nokukhanya okulungileyo kunye neendlela ezilungileyo, ke loo holide izisa ngokuphindwe kabini. Ngokomzekelo, njengoSuku lweNtsapho, Uthando kunye nokunyaniseka, apho iRashiya ibhiyozela ngomhla ka-Julayi 8, iholide encinane kodwa ibaluleke gqitha. Kwinqanaba layo elingundoqo, kungekuphela komKristu, kodwa kunye neempawu zendalo yonke, ezibizwa ukuba zenze ngcono eli lizwe kwaye libe nomusa. Abathengi bemthendeleko ngu-Saint Peter kunye noFevronia, abathi ngexesha lokuphila kwabo baba ngumzekelo ocacileyo wokonwaba lwentsapho olomeleleyo, uthando lokwenene kunye nokunyaniseka. Akumangalisi ukuba ngoJulayi 8, xa iintsapho zeOthodox zihlonishwa yi sibini esitshatileyo, abaninzi abathandanayo banokuzibophelela ngomtshato. Ukongezelela, sivuyisana ngoMhla woNtsapho 2017, onokubini kwivesi kunye neprose, kuyinto yesiko ukupheka izihlobo kunye nabahlobo. Umzekelo, ngaleli holide elimnandi kuyimfuneko ukuvuyisana kuphela ngumntu othandekayo / umyeni okanye umfazi, kodwa nomama othandekayo nobawo, abafaka umfanekiso wentsapho. Iminqweno emihle yoSuku lweNtsapho iyafanelwe kwaye iyaziwayo abafazi kunye nabahlobo abasondeleyo, nokuba ngaba basesetyenziselweni sabo sesibini. Kwaye ukunyaniseka kwethu okufutshane kunye nokuhlekisayo ngoSuku lweNtsapho, oluya kulufumana ngakumbi, luyakunceda ukuba ukhethe izifiso ezilungileyo kubo bonke abantu!
Siyavuyisela ngomhla weNtsapho, Uthando nokuthembeka-2017 kwiindinyana zomfazi wakhe othandekayo
Ewe, iimbongo ezintle kunye nokufudumala ngokufudumele ngomhla weNtsapho, Uthando kunye nokunyaniseka kufuneka kuzwakale kumfazi wakho othandekayo. Nguyena umfazi ongumgcini wekhaya kunye nomva onamandla kumntu wakhe. Kwimixholongwane ephosakeleyo yomfazi inikwe imisebenzi eninzi, eyona nto ibalulekileyo ekudalweni kwentsapho eyomeleleyo. Kwaye kulo msebenzi usebenza yonke imihla, ukwenza imizamo enzima. Ngoko, kutheni ungayisebenzisi ithuba kwaye ungambukeli ngazo zonke iinzame kwiholide enjalo! Makhe ukhethe enye yeembuliso ezintle kunye nosuku lweentsapho, uthando kunye nokwethembeka kwiindinyana zomfazi othandekayo, esiziqokelele ngezantsi, kwaye simnike ingqwalasela awayilindele kulolu suku.
Imibongo yovuyo ngosuku lweentsapho, uthando kunye nokunyaniseka kumfazi wakhe othandekayo
Ndifuna umnqweno wokukhula, Mfazi wam othandekayo, Yenza intsapho yethu ibe neentyatyambo. Ndiyathanda, ndiyakunqwenela impilo, kwaye ndikuthumele i-daisies, Kusuka kumfazi, ndiza kuthatha i-bouquet, iRoma, oku kuphefumlela. Siza kugcina ixabiso leentsapho, Kule holide yothando nokuthembeka, Ukuvakalelwa ngeeholide kuya kuxhaswa kuphela, kwaye oko kuyimfuneko, siya kuphinda.
Ndiyombulela kuThixo ngobomi, Ngentsapho, ngomfazi, kubantwana, Ndithanda gqitha ukunwabazela, Ngoko kubanda sasifudumala. Ngomhla wentsapho, uthando kunye nokuthembeka, ndifuna ukuba sihambe ngonaphakade, Ngaphandle kokuvumela ukuphelelwa yikhwele, Zonke izikhalazo ezijikelezayo zijikeleze.
Ngenye indlela ye-Western saint, Ngomhla wentsapho, uthando kunye nokuthembeka, umfazi. Sidinga ukuqinisa intsapho yethu, Ukuze iimvakalelo zethu ziphakame njengodonga. Musa ukuvusa indawo yokuhlala emangalisayo, Musa ukutyumza iindwendwe ezakhiweyo, Gcwalisa iimvakalelo zakho ngesimo sengqondo esondla kakuhle, Musa ukuphazamisa umlambo we-citadel. Ngokholo kwaye uthembele ezulwini, vuyiswa ngumfazi omhle, Yonke into yokuqonda iyiluncedo, kwaye iya kuba namandla kunokwintsapho.
Eyona nto imnandi kakhulu kwiindinyana ukusuka kwiSuku loNtsapho-2017 kumyeni kumfazi wakhe
Ukuba umfazi ungumgcini wolonwabo lwasekhaya, ngoko umyeni nguye oyintloko kunye nomkhuseli kwintsapho. Injongo yakhe emtshatweni ayifuni umzamo ongaphantsi kunabesifazana, kwaye idla ixesha elininzi kunye namandla. Kodwa ukuba umfazi uyakwazi ukuzalisa amandla omyeni wakhe ngexesha kunye nokunyamekela kwakhe, ukunyamezela nokuthanda, ngoko uxanduva lweentsapho luzisa ulonwabo kunye nokwaneliseka kumfazi. Kwaye akukhona nje ngesidlo esimnandi kunye nekhati ecocekileyo, kodwa nangomngcobo osondeleyo kunye nokuthanda imfudumalo yeeholide. Ngokomzekelo, intlonelo eninzi kwiindinyana zomyeni kumfazi wakhe, elungiselelwe uSuku lweNtsapho, lunokuba lukhulu ukuphakamisa isimo sengqondo kunye nokuzithemba komntu othandekayo. Into eyona nto kukuthetha ngothando nangombulelo, ukuze indoda ethandekayo izakuziva ukubaluleka komsebenzi wakhe. Kwaye iyanconywa kakhulu kwiindinyana zoSuku lweNtsapho kumyeni wakhe kumfazi uya kukunceda ukhethe iinqwenela ezifanelekileyo kwesi sihlandlo.
Iingoma ezilungileyo zokubingelelwa ngoSuku lweNtsapho ka-2017 kumyeni wakhe
Ndithandekayo, zintanda, ziyingqayizivele, ndiyavuyisana nani ngoku. Ndiyaziqhenya ukuba isifo sidibene nawe, ukuba unesiqingatha sam! Intsapho kunye nawe yinto ebalulekileyo ebomini. Yaye khumbula, ndihleli kunye nawe. Kwimeko nayiphi na imeko andiyi kukushiya, ntanda wam! Makubekho ukulungelelana nokuvuleka Nolonwabo, nokuthembeka, uthando. Ndiyakuthanda, yedwa, Ngothando ndiyavuma kwakhona!
Ndiyakuvuyisela, myeni wam, ngosuku loNtsapho, uthando kunye nokuthembeka, Ndiyathanda ukuba wena kunye nam besihlala sinelisekile ngothando. Ngamnye ukuthembeka, ukugcina, Unyaka, ukutshintsha, Ukukhula nokuqinisa, ukuze intsapho, Phila, ukuxhalabisa ungayazi. Ndinqwenela ukuba sibaxabise uthando lwethu, ngaloo mini, emva konyaka, sithande ngakumbi.
Ndiyakuvuyela, ndihlala kweholide yeholide. Ndiyathembisa ukuba ndiyakuthanda, Ugcina ubuqotho bam. Yaye maye kwintsapho yethu akuyi kuba neentsuku ezibuhlungu, ukulangazelela. Ndiya kukugcina uthembekile, kwaye uyandithanda. Kwaye masithi, kwidleke yentsapho Yenza ulonwabo ngaphezu komda. Kwaye, mna, mntanda wam othandekayo Musa ukuhamba ngesandla.
Imibulelo enomdla neNtsapho yoSuku 2017 kubahlobo kunye neentombi kwivesi
Abahlobo abasondeleyo kunye nabahlobo nabo banelungelo lokubulisa imilumkiso kunye neengoma ezihlekisayo zoSuku lweNtsapho ka-2017. Emva koko konke, ngokwenene, uninzi lwazo luvela kuluntu, inxalenye yentsapho yethu. Kwaye nangona omnye wabo engakatshatanga, kusabalulekile ukumncoma ngeli holide eliqaqambileyo ngokukhetha ukubingelela okulungileyo. Umzekelo, okunjalo, apho kuya kuba namazwi enkxaso kunye nezifiso zokufumana ukuhlala kwintlalo yokuqala. Kwaye ngoko umnqweno wakho uya kukhunjulwa kwaye ujabule, unokukhetha ukunyaniseka okumnandi kwiSuku loNtsapho 2017 kubahlobo kunye nabamantombazana kwiindinyana eziqokelelwa kwingqokelela elandelayo.
Iindinyana ezithandekayo zohlobo lweNtsapho Yomndeni 2017, abahlobo
Akukho nto ibiza ngakumbi kwintsapho. Uya kuhlala encedisa, Uya kunika inkxaso kwiinjongo kunye nezenzo, Ngokwenzayo nangamazwi. Akukho nto ixabisekileyo kwihlabathi leentsapho zasebusuku, iindwendwe ezihlangeneyo kwilizwe. Intsapho kwihlabathi ithetha kakhulu! Makube nokulawula ukuthula nokulunga kuye. Yaye iya kuba yindwendwe yangasese yovuyo. Makungavumeli igama elibi libe yi-apple yokungahambelani.
Amagama athi "intsapho, uthando kunye nokwethembeka" Ingqiqo enkulu ngokwabo ithwala. Apho intsapho - ihlala ithenda, apho uthando luhlala lu lindele khona, kwaye ukuthembeka, - kuthemba ngaphandle kweelwimi ezingadingekile kwaye ezingadingekile. Vumela ukuba le miva iphumelele
Ndiyakuvuyela ngoSuku lweNtsapho. Uthando nokunyaniseka ndiyathanda. Masibe nomthendeleko oqaqambileyo ulethe iMimangaliso imijikelezo yeentsuku. Vumela intsapho ibe namandla ngakumbi imihla yonke, uhlala ujabule.
Ukuthandana kwintsimi ngoSuku lweNtsapho ngoJulayi 8, umama nobaba
Abazali ngumzekelo obalaseleyo wobomi bentsapho kubo bonke abantwana. Kuhle xa umama nobaba behlala ndawonye iminyaka emininzi kwaye bayavuya emtshatweni. Ngokomzekelo wabo bazisa intlonelo yentsapho yabo kubantwana babo, bavuselele ukuba benze isidleke sabo esihlaziyileyo ... Ukuthandana ngoSuku lweNtsapho kwimibongo ngoJulayi 8 ukuba umama noyise yindlela elula kakhulu yokubonga kwaye bavakalise ukunyaniseka kwabo. Kwaye kwimeko apho abazali beqhawule umtshato, nto leyo, alas, ayiqhelekanga ngexesha lethu, nabo bafanelekile ukuvuyiswa ngeli holide eqaqambileyo. Emva koko, xa bakuba yintsapho enye, eyanikela eli hlabathi ubomi obutsha. Inomdla onomdla kakhulu kumama nobaba ngoJulayi 8 Usuku lwentsapho kwivesi kwiqoqo elilandelayo.
Ukuthintela iindinyana zokuvuyela umama nobaba ngoJulayi 8 Usuku lomtshato
Mamulya, ndiyakuvuyela Ngomhla wokuthembeka, usapho, uthando, Vumela uvuyo, thandeka, Amehlo akho agcwele akho! Intsapho iyona nto ibaluleke kakhulu, uyigcina ngokucophelela, Sisoloko sihlanganisa sonke, Siyakuthanda uthando lwakho.
Ndiyakuhalalisela, Tata, Utsapho olonwabileyo kunye nokunyaniseka, Uvuyo lweholide olukhulu kunye nexabiso elikhulu. Ndiyathetha yonke into yokubonga, Ukugcinwa kunye nokufudumala, Masibe neentloko zethu ezungeze ukukhanya kunye nokulungileyo.
Unentsapho eyolo, uthando kunye nokunyaniseka! Yiba, Mamulechka, uyavuya. Kulo bomi obunzima bemihla ngemihla, Nangona ubomi obumatasaba Khangela njalo, memeze, nhleka kakuhle, Ilanga likhanya, masibe sezulu! Wena ngethemba elihle!
Ndiyakuvuyela umfazi ngomhla woNtsapho, Uthando kunye nokuthembeka-2017 kwiProse and Poetry
Ayikho imfihlelo yokuba abafazi basemgangathweni kakhulu nangokomzwelo nangakumbi kunabantu. Ngaloo nto, akumangalisi ukuba imfuneko yamagama enkxaso kunye neemfuno ezifudumele kakhulu kunabo kunesondo esomeleleyo. Siyakuvuyisana ngoSuku lweNtsapho, uthando kunye nokuthembeka kwivesi okanye kwiprose-le yindlela enye yokuphakamisa imizwelo namhlanje kulo nawuphi na umfazi. Umntu osebenza naye, umhlobo osondeleyo, udade okanye umntu owayesefunda naye esikolweni - ngamnye kubo uya kuvuya ukuva iimfuno ezilungileyo kwiSuku loNtsapho. Eyona nto ibumnandi kunye nohlobo oluninzi lwabafazi ngeSuku loNtsapho, uthando kunye nokunyaniseka kwiprose nevesi kuza kufumana.
Iingoma kunye neenkqubo zokuvuyisana ngoSuku loNtsapho, Uthando nokuthembeka kuMfazi
Intsapho inokuthenjwa emva kunye nenqaba, isiseko kuyo uthando kunye nokunyaniseka. Vumela uthando luhlale ezintliziyweni kwaye lukhanyise emehlweni akho. Hlala ngokuvuyokileyo kwaye ucoceke, Yenza yonke into ibe yindlu. Ukuneliseka, uvuyo kunye nobutshinga, Bavumele bakuqonde kwaye balinde.
Le mini ilungile, Usuku lweentsapho kunye nokunyaniseka, ndifuna ukukuhalalisa ngeli holide. Ndi nqwenela ukuba ugcine indawo yakho kwaye ungayivumeli ukuba iphume. Uthando nokuqonda, umonde kunye nenhlanhla, uvuyo kunye nokuchuma, ukuhle kunye nokumamatheka! Gcina intuthuzelo yentsapho kunye nokufudumala, thandana kwaye unike isisa.
Usapho. Kulo gama zonke iintliziyo zikhule ndawonye. Injongo yobomi isentsapho. Ewe, kwaye kuyo yonke ubomi. Imindeni ayesabi nantlungu okanye ubunzima, Iqiniswa yiminyaka ephile. Yenza intsapho yakho ithande kuphela ivuselela, Yenza ukunyaniseka kunye nenjabulo ikukhanyise. Ukuphosa - ukuxolelwa, iingxaki - iingxaki. Hamba ngokumomotheka kwiintshaba ezintsha!
Uvuyo oluhle ngoMhla wentsapho indoda ethandekayo kwivesi kunye neprose
Ngaba kufanelekile ukuvuyisana neendinyana ezilungileyo kunye neprose yomntu othandekayo nosuku lweentsapho, ukuba ungatshatanga? Ngokuqinisekileyo, kuyafaneleka. Emva kukaJulayi 8, sibhiyozela kungekuphela koSuku lweNtsapho, kodwa kunye nosuku loLuthando nokuthembeka. Abaninzi banokuthi namhlanje ngumfanekiso wesiRashiya weeholide yabathandi, abaza kuthi bevela kwiNtsholongwane yeNtshona - uSuku lwe-Valentine. Enyanisweni, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba Usuku lweRashiya lweNtsapho, Uthando kunye nokunyaniseka kunzulu kakhulu kwingqondo engokomoya. Emva koko, akazukukuthanda nje kuphela, kodwa kunye neenqobo eziphambili ezizenzayo ngokwabo-intsapho eqinileyo neyoyolo. Ngako oko, unako ukukhetha ngokukhawuleza ukunyanzela ngoSuku lweNtsapho kwindinyana okanye kwiprose yendoda ethandekayo evela kwiqoqo elilandelayo.
Ndiyakuvuyisana ngeengoma ezilungileyo kunye nokutshintshwa kwindoda ethandekayo kunye nosuku lweentsapho lwango-2017
Impumelelo enkulu ebomini ifumana umntu onomdla ukujonga, ukuthabatha ukuphulaphula, ukuhleka ngokwenene, nokujonga phambili kwintlanganiso entsha. Unakekele abantu onokukhululeka kwiimvakalelo, iiminqweno neemvakalelo! Othandekayo, Usapho olonwabileyo, Uthando nokuthembeka! Ndiyabulela ngokuba ungubani, vuyisa, ndivuselele.
Darling, nonke unayo. Xa ungeyiki ngomlilo. Uvuyo, uthando kunye nethemba, ndifuna ukuba wazi ukuba ndikuthanda. Kwaye ngomhla wobu thembeko, nwabahlali, nentsapho, ndivuyiswa kukuba sifumene. Ndifuna ukuba konke kuzaliseke, ukuba ufuna, kwaye ndihlala khona, imini nobusuku.
Intsapho eyoyolo, Uthando kunye nosuku lokuthembeka. Imilambo yelanga, iintaba zothando, Uvuyo, uthando, othandekayo! Ubumbano kunye nomonde, Kuphela umgca omhlophe, Ulungelelaniso, uvakalelo, ama-droplets of Morning. Ngomso - isifiso esivuthayo Ihlabathi liyakhupha, liqonde, lixolele, Ngobusuku - ekuthandeni ukuqaphela ... Emva koko, ukuthanda uze uphile!
Mfutshane nincoma ngoSuku lweNtsapho, uthando kunye nokuthembeka kwi-SMS kwivesi
Imibongo emfutshane kunye nosuku lweentsapho, uthando kunye nokunyaniseka kukukhulu ukuvuyiswa ngefomathi yeSMS. Umyalezo onjalo onomnqweno onokufudumala unokuthunyelwa kubantu abaqhelana nabo, oogxa nabo, abahlobo kunye nezihlobo ezikude. Eyona nto imfutshane imincomelo ngoSuku lweNtsapho, uthando kunye nokunyaniseka kweesms kwiindinyana ziya kufumana.
Imibongo emfutshane yovuyo ngosuku lweentsapho, uthando kunye nokunyaniseka kweSMS
Ukuba uthatha Uthando nokunyaniseka, kubo bongeza ukuvakalelwa kwintsimi, Yonke inyule iminyaka, Iya kuvela-Intsapho!
Usuku Lwentsapho olonwabileyo, uthando kunye nokunyaniseka, ndikhawuleza ukuncoma nina bahlobo, Ndiyathanda ukuba uvuyo kunye nobubele, Ukuze uhlale uthanda inceba!
Intsapho ... Kwenzeka kangakanani kweli gama! Emva koko, lobuhlobo kunye nothando! Konke kwisiqingatha - kunye nokuhleka, kunye nentlungu! Kwaye igazi liyabilisa kwakhona! Namhlanje ndiyakuvuyisela ngeli holide leentsapho! Uthando nonwaba ndiyathanda! Unyamekele intsapho yakho! Uvuyo oluhle ngoMhla woNtsapho ka-2017 kwivesi kunye neprose, esiyiqokelele kweli nqaku, lilungele indoda / intombi ethandekayo, indoda, umfazi, umama, utata, intombi. Imibongo emfutshane kunye nezifiso ezipholileyo zoSuku lweNtsapho, uthando kunye nokunyaniseka kungathunyelwa kwiisms kubahlobo kunye nabahlobo abasondeleyo. Qiniseka ukuba usebenzisa ukuthokoza kwiikholeji zethu ukwenza intsapho yakho ijonge ngoJulayi 8!
Usuku lweeMpi zoMoya 2016: iziganeko kunye nokulwa neCaucasians kwividiyo. Ukuncoma ngokunyanisekileyo kwindinyana kunye neprose, i-SMS emifutshane kwiNtsuku yoMoya ovuyokileyo
Ndiyakuvuyela ngoMatshi 8 kwivesi kunye neprose
Ndiyakuvuyela umNyaka omtsha we-2017 umhlobo we-Rooster kwindinyana, iprose kunye namazwi akhe.
Ukuncoma, ukuhlekisa kunye nokusemthethweni ngokusemthethweni ngomhla we-Medic in prose kunye nevesi kwintsebenziswano
Indlela yokufunda ukuzonwabisa
Amacembe, abahambahambayo: ingozi kumntwana?
Ezi zixhobo ziya kukujika kwisithonjana somfanekiso: Yilokho okufuneka utyalole kuyo
Izithethe zothando: izibhambathiso zomtshato
I-Whitening Face Creams
Xa ungaqala ukubhukuda ehlobo le-2017
Yintoni evimbela umntwana ukuba afunde kakuhle
Ngaba ndingathenga iziqholo kwivenkile ye-intanethi?